Waa maxay iibgee.com? - IIBGEE: iibi ama iibso badeecado & adeegyo | Somali Online Market
iibgee.com waa barta internetka ee Soomaalida ee lagu kala iibsado badeecadaha iyo adeegyada. iibgee.com waxuu u furan yahay Soomaalida meel walba caalamka kaga nool; luuqadda iibgee ee rasmiga ahina waa Afka Soomaaliga. Hadii aad hayso badeecad cusub ama mid aad mudo yar isticmaashay oo aad doonayso in aad iibiso, ama aad hayso adeeg aad samayso, waxaad ku xayaysiin kartaa iibgee.com.
Sidan badeecadda ama adeegga u soo gali iibgee.com:
1- Badeecadda/adeegga sawir ka qaad.
2- Riix badhanka kore ee ay ku qoran tahay: XAYAYSIIN GALI.
3- Gali badeecaddaada ama adeeggaaga, adiga oo reebaya lambar ama email lagaala soo xariiro.
4- Marka aad badeecadda galiso, ku #share ku dheh baraha bulshada sida Facebook, Google, Twitter, iwm, si aad u gaarsiiso dad badan oo badeecaddada u baahan.
5- Hadii aad caawinaad u baahan tahay nala soo xariir, si aan kaaga caawino xayaysiinta badeecaddaada ama adeeggaaga. Fadlan #share iibgee.com, si Soomaali badan uu uga caawiyo in ay badeecadahooda iyo adeegyadooda ku kala gataan, dalka oo dhan.